Gulaali - KuusaDeetaa Jijjiirraa filadhu
Fakkeenyaaf, yoo dirreewwan teessoo xalayyaa unkaa kan kuusdeetaa teessoo tokko tahe keessatti saagda tahe, teessoowwan adda addaa saaguudhaaf, kuusadeeticha kuusdeetaa teessoo ka birroo waliin-jijjiijuu nidandeessa.
Qaaqa kana keessatti, yeroo tokkotti kuusdeetaa tokko qofa jijjiiruu dandeessa.
Kuusdeetaawwan Hojii irraa
Kuusdeetaawwan warra amma hojii irra jiran tarreessa. Galmeen ammaa, tokkoon tokkoon kuusdeetaawwan tarree irra jiraanii keessaa, yoo xiqqaate, dirree deetaa tokko of keessaa qabaata.
Bakka faayilii kuusadeetaa (*.odb) tokko itti filachu dandeessuu, qaaqa faayiliin tokko banaadha jedhu bana. Faayilichi filatamaan, Kuusdeetaatti Jiraataatti ida'ama.
Kuusdeetaa tokko waliin-jijjiiruuf:
Kuusdeetaawwan lamaaniyyuu maqaawwan dirree fi akaakuuwwan dirree walsiman qabaachuu isaanii mirkaneeffadhu.
Galmee isa madda deetaa jijjiiruufii barbaaddu keessa cuqaasi.
Tarree Kuusdeetaawwan Hojii irraa keessatti, kuusdeetaa isa bakka buusuu barbaaddu filadhu.
Tarree Kuusdeetaawwan Jiraataa keessaa, iddoomaa gabatee kuusdeetaa filadhu.
Title is: Kuusdeetaa Gegeeddari